Fitaovana Web Scraper - Semalt Expert
Ny tranokala web dia Chrome extension extension aimed to extract data from web pages . Amin'ny alalan'ity fanitarana ity, afaka mamorona sitemap na drafitra ianao, izay mampiseho ny fomba mety indrindra hijerena tranonkala iray ary manaisotra ny angon-drakitra avy amin'izany.
Raha manaraka ny sitemap, ny Web Scraper dia hivezivezy ao amin'ny pejin-tranonkala manaraka ny pejy ary hikapoka ny votoatiny ilaina. Azo alaina tahaka ny CSV na endrika hafa ny rakitra voarara. Ankoatra izany, ity fanitarana ity dia azo apetraka amin'ny Chrome Store raha tsy misy olana.
Ny fahafahana manakona pejy maromaro
Ny fitaovana dia afaka mamaha ny angona azo avy amin'ny maromaro tranonkala miaraka raha atokana ao amin'ny sitemap. Raha mila mamoaka sary rehetra avy amina tranokala 100 ianao, dia mety handany fotoana be mba hanamarinana ny pejy tsirairay ary hahafantaranao izay misy sary sy izay tsy misy. Azonao atao àry ny mampianatra ny fitaovana hanamarina pejy tsirairay ho an'ny sary.
Ny fitaovana dia mitahiry ny angona ao amin'ny CouchDB na ny fitehirizana ny tranokala
Ny tranokala dia manangona sitemaps ary ny angon-drakitra na tahirin-tsakafo ao an-toerana na CouchDB
Satria ny fitaovana dia afaka miara-miasa amin'ny karazana data maro, ny mpampiasa dia afaka mifidy karazan-tsivana maromaro ho an'ny fanangonana azy amin'io pejy io. Ohatra, izy io dia afaka manala sary sy sary roa avy amin'ny tranonkala amin'ny fotoana iray ihany.
Ny angon-drakitra avy amin'ny pejy dynamic
Ny fahafahana mijery ny angon-drakitra
Ny fitaovana dia ahafahan'ny mpampiasa mijery ny angon-drakitra alohan'ny hamonjena azy amin'ny toerana voatondro
Manondrana ny angon-drakitra (CS)
(Ex-Web Scraper) manafatra angon-drakitra ho CSV, saingy afaka manondrana azy koa amin'ny endrika hafa. )
Ny fampisehoana sy ny importation sitemaps
Mety mila mampiasa sitemaps imbetsaka ianao mba hahafahan'ny fitaovana manafatra sy manondrana sitemaps amin'ny fangatahana.
Miankina amin'ny Ny birao Chrome
Indrisy fa tsy fahampian-tsakafo izany tombontsoa izany, fa miavaka amin'ny navigateur Chrome ihany
fitaovana fandinganana hafa
Ity rafitra ity dia azo ampiasaina hanodinana ny rehetra
Azonao ampiasaina ihany koa Wget ny sc Fanapahana tranokala iray manontolo mora. Saingy misy ny tsy fahampiana kely amin'ity fitaovana ity, tsy afaka mamaky ny rakitra CSS izy.
3. Azonao atao koa ny mampiasa ireto baiko manaraka ireto mba hamehezana ny votoatin'ny tranonkalanao alohan'ny hisintonana azy: 80
(85 ) file_put_contents ('/ some / directory / scrape_content.html', file_get_contents ('https://google Source .com'));